Saddex arrimood oo sabab u noqday inuu hakado Ololihii Mooshinka Madaxweyne Farmaajo – Hornafrik Media Network
1-Arrinta koowaad ayaa lagu tilmaamay isku day Kooxda Mooshinka waday ku doonayeen inay kaga dhaadhiciyaan Guddoonka Golaha shacabka inuu dib u dhigo xilliga la soo xirayo kalfadhiga oo ku beegan maanta oo 16-ka bisha December tahay, isla markaana muddo 10 maalmood dib loo dhigo. si ay ugu suurta gasho in mooshinkooda oo diyaar ah ay u geeyaan.
2-Tan labaad ayaa ah in kala fur-furid uu ku bilowday Xildhibaanada mooshinka saxiixay, kuwaasoo laga war helay tiradooda, waxaana maalmo ka hor ka laabtay mooshinkii uu saxiixay Xildhibaan C/llaahi Shaacir, taasoo keentay in kooxdii mooshinka waday ay dareemaan culeys ah inuu ku socdo kala fur-fur bilow ah.
3-Arrinta kale ee caqabada keentay ayaa ah isku day xubnaha mucaaradka ku doonayeen in fikradahooda kaga gadaan Culimada oo xilligan difaac iyo gaashaan u ah dowladda, waxaana guuldareystay kulamo ay kaga dhaadhicinayeen qorshayaashooda.
Ilo ku dhow dhow Xubnaha Mooshinka waday ayaa sheegaya inay go’aansadeen in mooshinkooda dib u dhigaan, illaa Baarlamaanka fasaxa ka soo laabanayo, waxaana wararka qaarka sheegayaan inay heystaan tiro ku filan oo gaaraysa Boqol Xildhibaan.
Si kastaba ha ahaatee inta uu xiran yahay kalfadhiga labaad ee Baarlamaanka Waxaan yaraan doona Culayska dowladda Federaalka ah ka haysta dhinaca Baarlamaanka, waxaana la saadaalinayaa inta fasaxa lagu maqan yahay inay is bedelo dhici doonaan.
Iiraan oo la sheegay in Hubka ay u waddo Xuutiyiinta ay usoo Mariso Xeebaha Soomaaliya.